5 Ny Neat Ways Semalt SEO Fitaovana ary Web Analytics dia manatsara ny laharan'ny tranonkalanao
Ianao ve tompona orinasa kely, fivarotana an-tserasera, fanombohana, freelancer, na mpanoratra nanandrana nametraka ny tranokalany nandritra ny fotoana naharitra ary tsy nanana vintana hatrizay?
Hitanao ve ny tontolon'ny SEO manjary tsy mitombina, fa tsy mitombina fotsiny ary mandany fotoana be sy be loatra?
Tsara fa tsy irery ianao!
Ny fahazoana toerana misy ny tranonkalanao dia iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja indrindra amin'ny fampandehanana orinasa an-tserasera, ary ny fiantohana ny fisehoan'ny tranokalanao eo amin'ny pejy voalohany an'ny Google dia tokony ho laharam-pahamehanao voalohany.
Araka ny fanadihadiana iray dia 95% amin'ny fifamoivoizana an-tserasera no alefa any amin'ireo tranonkala hita eo amin'ny pejy voalohany an'ny Google, ary ny 5% ihany no azon'ny pejy manaraka.
Ankehitriny, alohan'ny hieritreretanao fa vita ity lalao ity, ny fampidirana ny tranonkalanao dia tsy sarotra akory. Mila faharetana sy fanokan-tena maharitra ihany izany. Ao amin'ny Semalt, takatsika fa ny ampahany lehibe amin'ny fotoanao dia lany amin'ny fampandehanana ny orinasanao sy ny fitantanana ny asa rehetra miaraka aminy.
Izany no antony nampifanarahanay ny serivisinay SEO sy ny serivisy an'ny Web Analytics fa tsy vitan'ny hoe manampy anao ho ambony kokoa amin'ny Google, fa manome anao hidirana data sy statistika manan-danja momba an'ireo olona mitsidika ny tranokalanao ihany koa. Rehefa ela ny ela, ity fampahalalana ity dia mety hisy fiantraikany tsara amin'ny fanapahan-kevitry ny orinasanao, mamela anao hanondro ny fiheveran'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny hahafantatra ny filan'izy ireo amin'ny fomba marina kokoa ary farany hanidy ny fifanarahana bebe kokoa.
Ny olona ao ambadiky ny Semalt dia niasa mafy sy nitaintaina tamin'ny famolavolana ireo fitaovana SEO ireo nandritra ny taona niainany manokana. Andao hojerentsika ny fomba hanampian'ireo fitaovana SEO SEO sy ny endri-tranonkala an'ny tranonkala anao ho miroborobo.
5 Fomba 5 SEO Fitaovana Semalt ary Web Analytics manatsara ny laharan'ny tranonkalanao
1. Optimization tranonkala:
Semalt dia manome ny serivisy fanatsarana tranokala feno izay manampy ny tranokalanao hanana toerana ambony, tsy mora, ary mora amin'ny motera fikarohana toa an'i Google . Ny tranonkala iray voatsara dia manohitra tsara amin'ny metika toa ny fifamoivoizana mavesatra be, ny habetsaky ny fotoana lanin'ny tranokala, ary manana fisondrotana bavidina ambany kokoa, izay midika hoe ny isan'ireo olona mitsidika ny tranokalanao ary miala avy hatrany. Ny ekipanay manam-pahaizana momba ny SEO dia mifantoka amin'ny filàn'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny fanaovana drafitra SEO sy optimization tranonkala izay manintona mpanjifa bebe kokoa ary manampy amin'ny fampitaovana ny orinasanao bebe kokoa.
Ny fanaovana antoka fa hampidirina avy hatrany ny tranonkalanao dia lafin-javatra iray manan-danja amin'ny optimization tranonkala. Raha maka 3 segondra ny lanjan'ny tranokalanao dia mety misy ny mpampiasa avo lenta amin'ny fahatafintohinana ary miala.
Izany dia mampihena mivantana ny fifamoivoizana miditra ary eo koa ny isan'ny miverina, izay misy fiantraikany amin'ny tsara ny laharan'ny tranonkalanao. Ny fitaovana Semalt SEO dia manome antoka fa ny tranokalanao dia voalamina tsara mba hahatratrarana ireo lasibatra ilaina ary vonona handray andraikitra izy ireo mba hiasa tsara amin'ny birao sy finday / tablety satria mihoatra ny 50% amin'ny fifamoivoizana an-tserasera no hita ho vokarina amin'ny alàlan'ny smartphone.
Ny fanamafisana tranonkala mahomby dia midika fa hanana traikefa mpampiasa mpampiasa tsara ny mpitsidika anao rehefa mitsidika ny tranokalanao izy ireo, mahatonga azy ireo hiverimberina hiverina sy hijery azy ireo matetika amin'ny ho avy.
2. Fanadihadiana momba ny teny fanalahidy
S Ny serivisy AutoSeo an'i emalt, ao anatin'izany ny fikarohana momba ny teny lalina ho an'ny tanjonao, ny optimization amin'ny pejy, ny fananganana rohy, ary ny tatitra an-trano momba ny tranonkala feno izay natao tamin'ny tanjona iray: manampy ny tranonkalanao hiakatra eo an-tampon'ny Google SERPS.
Saingy raha te hahatratra ny laharana ianao dia mila torolàlana sy famantarana ny fisianao ny tranokalanao mba hankanesana anao. Ahoana no ametrahanao ireo famantarana ireo mba hahatongavan'izy ireo aminao?
Eny, amin'ny alàlan'ny fikarohana keyword! Amim-pahatsorana ny tsy misy atidoha. Satria aleo manao ny marina, miaraka amina mponina maherin'ny 3 miliara amin'ny Internet, ny tranokalanao dia toy ny trondro kely ao anaty ranomasina lehibe. Afaka manampy anao miova i Semalt.
Ny fikarohana ny teny fanalahidy no fototry ny SEO tsara, ary ny fahalalana tsara hoe iza ireo teny tokony hampidirina ao anaty atiny amin'ny Internet no hanondro anao fa tsy ny laharanao, fa ny fifamoivoizana miditra, ny optimization tranonkala ary maro hafa.
Na toa ianao ka miantsena vokatra vaovao, serivisy na ho an'ny tenanao, dia mamorona toe-javatra ilaina, ary ny fitadiavana teny fanalahidy izay mifanaraka amin'izany dia fomba tokana ahafahana miakatra hatrany amin'ny olona marobe.
Na mila mampiasa teny fanalahidy fohy na teny fanalahidy lava ianao, na mila mahita hoe iza ny isan'ny fotoana marina hilazana teny iray, dia tsy afaka mamaly ireo fanontaniana rehetra ireo ihany i Semalt AutoSEO fa afaka mamita ny asa ihany koa. . Afaka manao veloma ianao sao matahotra fa hanao fikarohana keyword momba ny tranokalanao ary matoky an'i Semalt hitantana ilay asa ho anao matihanina.
3. Fanoratana votoaty:
Niresaka momba ny fikarohana teny keyword sy fampiasana tsara izahay etsy ambony, fa ny fitadiavana teny fanalahidy dia tsy ny tanjona farany ihany. Ny fomba ampiasanao ireo teny fanalahidy sy fanoratana atiny izay miresaka amin'ny mpihaino anao no ho fanapahana amin'ny fihazonana ny mpampiasa.
Ahoana no hahitanao ny sain'ny mpampiasa anao, sy hiresahanao ny olany sy ny vahaolana tamim-pahalemena, ary mifanentana amin'ny andrasany?
Zary mirakitra ny fanoratana votoaty ary tsy ny rehetra dia mpanoratra teraka. Na izany aza anefa, tsy midika izany fa tsy azonao atao ny mianatra mamorona votoaty mahomby, mazava, mahitsy ary fampahalalana.
Tsy maintsy mahatakatra ianao fa rehefa miresaka amin'ny SEO izy dia "tonga aloha ny olona", ary rehefa fantatrao izany, dia manjary mora kokoa ny manoratra votoaty izay hahatonga ny mpitsidika hiditra sy hiverina hatrany.
Ny fanoratana votoaty dia midika ihany koa fa tsy manapoaka baomba ireo mpampiasa anao amin'ny famerenana ireo teny fanalahidy marobe izay mahasosotra anao ary mahatonga ny mpampiasa anao hahatsiaro ho very. Manoratra ianao hamaha ny olany, fa tsy ny famoronana hafa.
Ny votoatiny dia tsy tokony hahaliana ny mpamaky anao fotsiny fa manana fahaiza-mamaha ny olana nanjo azy ireo. Raha tsy nahatanteraka ny iray amin'ireo fepetra ireo izy dia tsy hihabe ny isan'ny mpitsidika miverina.
Ny ekipa manoratra momba ny votoatin'ny Semalt dia mahay ny asa-tanana ary afaka manampy ny tranokalanao hitombo ary koa mitazona fifamoivoizana miditra sy miverina.
4. Fivoarana tranonkala
Hatreto, efa nilaza ny fomba rehetra ahafahana manampy ny tranokalanao amin'ny toerana misy anao ny fitaovana SEO SEO, na izany aza, raha mbola tsy manana ianao dia aza manahy. Tsy mametraka tranokala misy ihany i Semalt, fa mamorona hevitra sy fahitana ho tranonkala miasa ihany koa, hatrany am-boalohany.
Amin'izao vanim-potoana nomerika izay iainantsika izao dia miasa toy ny portfolio iray ny tranokala iray, ny famerenana indray, ary ny fivarotana iray mijanona ho an'ny fampahalalana rehetra ilainao amin'ny raharaham-barotra rehetra. Ny fanaovana antoka fa mandeha, manintona, mampita fahalalana, ary voalamina tsara dia mitovy amin'ny fanaovana fahatsapana voalohany mandritra ny tsenam-barotra.
Semalt dia manome ekipa mahay mpamorona tranonkala izay mahay ny tranokala sy ivelan'ny tranokala. Avy amin'ny famolavolana fivarotana E-varotra mankany amin'ny fikarakarana ireo rafi-pitantanana ny votoatiny, ny ekipa dia hanome serivisy fampandrosoana amin'ny tranonkala SEO izay manampy amin'ny fandrosoana ny asanao.
Miaraka amin'ny fampifangaroana tanteraka ny fitaovana sy teknika SEO rehetra, ny tranonkalanao dia ho laharana ambony amin'ny fotoana tsy misy.
Farany, fomba iray manan-danja iray hafa manampy an'i Semalt amin'ny fampitana ny tranokalanao dia ny fanomezana analytics amin'ny alàlan'ny Checker ranking keyword Semalt ary Web Analyzer hitoerana ambony amin'ny fironana farany indrindra.
Ny mpandinika dia mampiseho hoe hatraiza ny laharan'ny tranonkalanao eo amin'ny pejy valin'ny Google Search Engine ary manome teny fanalahidy izay afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana SEO nokendry. Azonao atao ihany koa ny manara-maso tsara ny fanaovana ny fifaninanana ataonao ary ahita izay miasa ho azy ireo.
Ny Analytics dia tena ilaina tokoa mba handraisana fanapahan-kevitra amin'ny ho avy mifandraika amin'ny varotra marketing ary mikendry ny fampielezana SEO izay tsy vitan'ny fisintonana ireo mpanjifa vaovao fa hanatsara ihany koa ny filaharana. Manome anao ny fahitana ilaina rehetra i Semalt mba hahafahanao manapa-kevitra miaraka amin'ireo torohevitra matihanina amin'ny dingana manaraka.
Ny serivisy Web Analytics avy amin'ny Semalt dia mpanova lalao amin'ny resaka fampielezanao SEO.
Iza no afaka mandray soa avy amin'ny Semalt SEO Fitaovana sy tranonkala an-tranonkala?
Ankehitriny, raha manontany tena ianao hoe iza no afaka mahazo tombony amin'ny fitaovana SEO SEO sy ny analytics tranonkala, ny valiny fohy dia misy na iza na iza amin'ny fanatrehana an-tserasera.
Ny valiny lava, amin'ny lafiny iray, dia misy tompona orinasa, mpandraharaha, orinasa niche, na mpamatsy serivisy manokana izay mila miantsena ny fahaizany amin'ny Internet ary mila takelaka fahazoana mivoaka ho an'ny mpihaino nokasaina hatao.
Na mpanoratra amin'ny fahasalamana sy ny fomba fiaina ianao, na mpamoaka boky dia tia tantara, na mpitia teknolojia mankafy ny famerenany ireo gadra vaovao any an-tsena, ny fitaovana Semalt SEO dia afaka manampy ny tranokalanao hahatratra mpihaino maro kokoa manerana izao tontolo izao.
Tsy vitan'ny hoe mahazo ny fahaizanao manokana ianao, fa ny loharano hafa rehetra amin'ny toerana iray, fa tsy maintsy hitadiavana manokana ianao.
Ka na te hanitatra ny orinasanao amin'ny Internet ianao na maniry ny hivarotra ny volanao quirky amin'ny alàlan'ny tranokalanao manokana, dia hamerina anao i Semalt ary hanao izay hahazoana antoka fa tsara ny tranokalanao amin'ny SEO, ary hiroborobo ny orinasanao mandritra ny taona maro.
Semalt no mpamatsy marketing digital miorim-paka feno rehetra izay hitondra ny orinasanao amin'ny Internet bebe kokoa. Na mitady ny optimization tranonkala, fampandrosoana ny tranonkala, analytics ianao, na mila fanampiana fotsiny amin'ny famoronana votoaty izay kendrena tanteraka miaraka amin'ireo teny fanalahidy mety, dia ifandraisa fotsiny aminay.
Ny fitaovana sy ny serivisy nomen'ny Semalt dia hahazo antoka fa lasa manana toerana ambony eo amin'ny Google ambony ny tranonkalanao. Amin'izany fomba izany, hijanona dingana iray alohan'ny fifaninanana ianao ary hahazo fifamoivoizana organika bebe kokoa hampiakarana ny fidiram-bola.
Semalt dia manana fonosana samihafa ho an'ny karazan'olona tompona orinasa rehetra; na mila AutoSeo, FullSEO, Web Development na Web Analytics ianao dia hifandraisa amin'ny ekipanay anio mba hahitana izay tena mahasoa ho anao sy ny orinasanao, mba hahafahantsika manomboka ny dian'ny famoahana ny tranonkalanao miaraka.
Ny Analytics dia tena ilaina tokoa mba handraisana fanapahan-kevitra amin'ny ho avy mifandraika amin'ny marketing ara-barotra sy lasibatra SEO izay tsy vitan'ny fisintonana ireo mpanjifa vaovao fa hanatsara ihany koa ny filaharana.